को हुन् हेमन्तप्रकाश ओली ‘सुदर्शन’ ? (राजनीति प्रवेशदेखि तीन बर्षे जेल जीवनसम्मको नालीबेली) - Sisne Online
को हुन् हेमन्तप्रकाश ओली ‘सुदर्शन’ ? (राजनीति प्रवेशदेखि तीन बर्षे जेल जीवनसम्मको नालीबेली)
विप्लव नेतृत्वको नेकपाका शीर्ष नेता हेमन्तप्रकाश ओली ‘सुदर्शन’ पक्राउ परेपछि उहाँको बारेमा जान्ने धेरैलाई चासो हुनुपर्छ । यसै सन्दर्भमा उहाँको संघर्षको संक्षिप्त नालीबेली खोज्ने प्रयास गरिएको छः
रुकुमको त्रिवेणी गाउँपालिका घर भएका ओली नेकपाभित्रका प्रमुख वैचारिक नेताको रुपमा चिनिनुहुन्छ । जनयुद्धकालमा तत्कालीन नेकपा माओवादीको उच्च तहमा रहिसक्नुभएका उहाँ पार्टी विभाजनपछि लामो समयसम्म प्रचण्ड नेतृत्वको एकीकृत नेकपा माओवादीहुँदै नेकपा माओवादी केन्द्रमा रहनुभएको थियो ।
सो पार्टीमा असन्तुष्ट भएपछि उहाँले छुट्टै नेकपा न्यूक्लियस गठन गर्नुभएको थियो । त्यसपछि मात्रै उहाँ विप्लव नेतृत्वको नेकपामा प्रवेश गर्नुभएको हो । हाल उहाँ सो पार्टीमा विप्लव, प्रकाण्डपछि तेस्रो बरियतामा हुनुहुन्छ । उहाँ साहित्यिक र दार्शनिक क्षेत्रमा एचपी हिमालीको नामबाट स्थापित हुनुहुन्छ ।
एक बर्षपछि बझाङ र बाजुराम कार्यक्षेत्र भएको बेला जेल पर्नुभएका ओली रिहा भएपछि पुनः २०५५ को गोवा बैठकबाट केन्द्रीय समितिमा सामेल भएर जनयुद्धकालमा कमिसार र राज्यको इञ्चार्जको रुपमा सक्रिय हुनुभएको थियो ।
शान्ति प्रक्रियापछि तत्कालीन राप्ती ब्यूरो इञ्चार्ज हुँदा जनएकता तथा रुपान्तरण अभियानको अगुवाइ गरेका ओली लामो समय मगराज राज्य समिति इञ्चार्जको रुपमा क्रियाशील हुनुहुन्थ्यो ।